Igwe na-agbaze agbaze, emere ka ọwa ọkụ ọkụ, nwere a ngụkọta ikike ijide 50 t na ihe bara uru
n'ihi na-Gbanyụọ nke 40 t kacha. Emeputa ikike gbazee ndi mmadu abuo tinyegoro n’elu at akọwara akụkụ on
ọkụ n'ala na a ngụkọta njikọ jikọtara 3,400 kW. Onye ọ bụla na-emepụta ihe na-emepụta ihe ntụgharị nke aka ya maka ọrụ njikwa onye ọ bụla.
In na omume nke odida nke otu inductor, ndị ọzọ na-ejide ikiri ụkwụ dị ọkụ at okpomọkụ mgbe na-ezighị inductor bụ
na-edochi. Ọkụ ahụ adịla njikere ọzọ maka arụmọrụ arụmọrụ mgbe emechara a oge nke 12 awa. Igwe a wụrụ awụ bụ
wụsara si site na oku na-ebu ọkụ ma nwee ike ịfefe ya at gradient efu na ebe nchekwa a at na ọnụego nke 4 t/h. Njide-na-mgbatị ọkụ na-anabata gbazee site n'oké ọkụ amị. Nke a na-enyere ọla aka na laghachi na ọkụ na-agbaze ma ọ bụrụ na achọrọ, n'otu aka ahụ at gradient efu.
Inductor Ọrụ Ndụ na Mgbanwe Time
The ọrụ ndụ nke onye inductor dabere na ikike arụnyere, na ụdị usoro jụrụ oyi, ọdịdị nke ọwa ahụ, na ụdị nke seramiiki lining. Ọrụ a na-akọ ndụ ụbọchị 250 maka ikuku-mma nhazi gosiri at 250 kW, kama nke nání 100 ụbọchị maka ogo 400 kW. In ma ikpe, ihe igwe eji eme ihe bu ihe ruru 1,600 t aluminum.4
Site n'imeziwanye obi jụrụ mmetụta na ụdị nke seramiiki lining, ọ ga-ekwe omume maka 400-kW inductors na- nweta ihe ndụ nke
Daysbọchị 250 na ihe na ntinye nke 2,500 t/inductor. Otú ọ dị, na-arụ ọrụ ndụ naanị 100 ụbọchị bụkwa amaghi. Osisi ozo na aru oru akụkọ ndụ ọrụ ihe nke 15-27 ọnwa.
Elu inductor Fim nke 900 kW na ihe na production udu nke 30 t/ ụbọchị kwa ihe ndozi, mkpa eduzi
igba nke metal na kpụ ọkụ n'ọnụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nwere ọ bụghị ma ị nọ n'ọrụ ruo ogologo oge ọ bụla. Ahụmahụ izizi gosipụtara na gbasie ike akpata mbuze na vetikal ọwa.
ọbụna ọ bụ ezie na ọ bụ ọ bụghị dị mkpa na hichaa ọwa, ndị chọrọ ọrụ ndụ nke ihe inductor bụ belata. Furemeela ka ihe kawanye mma igba ma site n'inye a ihe kwụsiri ike mmiri mma
usoro, nke na-enye olileanya n'ihi na nweta ndụ ọrụ ihe nke 12 ọnwa maka onye di elu-ike inductors.
Enwere ike ịkpụzi ihe mgbochi aluminom n'ọtụtụ agbaze agbaze:
• kpọmkwem-kpo oku kpo oku (gas ma ọ bụ mmanụ-kpochapụrụ) ya na ulo oru oku
• induction agbaze ọkụ, ọwa ma ọ bụ ụdị mkpọ.
Nhọrọ nke otu kpebisiri ike n'ụzọ bụ isi site na nnweta na ụdị ike na mmepụta akwụ ụgwọ.
Enwe mmanụ ugbu a chọrọ anyị na re-nyochaa ọdịdị ya n'ọdịnihu. It is na ga-atụ anya na ịrị elu mmanụ ụgbọ ala ga-abuana an abawanye na ugwo nke ike dochie anya- ọkụ eletrik- nke ikpe chere ga be nyere
karia ihe nile na ihe kachasị ojiji nke ụdị nke ike dochie anya, ebe a, oku oku oku na-enye a
elu-ihe ntinye ihe ntinye aka, ebe obu na oku sitere na oku eletrik ozugbo na bat.
Ọrụ na-arị elu akwụ ụgwọ na mba ndị mepere emepe na ọnụ ahịa ọla dị elu na-amanye anyị na remelt ọbụna ala-ọkwa, ọkụ-nlele ihe mkpofu na na eji a agbaze unit ebe ihe ndị dị mkpa na chọpụta nhazi akwụ ụgwọ dị ala, ya bụ ike akwụ ụgwọ, gbazee ihe, mmezi akwụ ụgwọ, na ọrụ akwụ ụgwọ.
Categories Technologies Tags enwunye ọkụ ọkụ na-esi ísì, aluminum melting, aluminum na-agbaze ọkụ, aluminum melting oven price, aluminum smelting, aluminum smelting ọkụ, zụta almọnd aluminium, enwu ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, induction melting aluminum, induction oven, induction agbaze aluminom ọkụ, agbaze aluminom scraps Mail igodo